Zenziwa njani iibhotile zeglasi?
ngu admin nge-20-04-29
Inkqubo yemveliso yeebhotile zeglasi ikakhulu ibandakanya: material Ukulungiswa kwezinto ezingasetyenziswayo kwangaphambili. Zikhuhle izinto ezingafunekiyo (i-quartz isanti, umlotha wesoda, i-limestone, ifeldspar, njalo njalo) ukomisa izinto ezingamanzi, kwaye ususe nezinto ezingafunekiyo zensimbi ukuqinisekisa umgangatho weglasi. ② Ukulungiswa kwe ...
Ukuchola ukugcinwa kwexesha elide okanye ibhotile yeglasi kufanelekile
ngu admin nge-19 ukuya ku-12
Iibhotile zebhotile, ekuboneni kwabantu abaninzi zihlala zilawulwa yibhotile yesilwanyana. Kwixa elidlulileyo, udongwe lomhlaba njengeebhotile zokucola ukhukhamba, luyimfuneko kusapho ngalunye.lixesha langoku, ngesantya sobomi esikhawulezayo, iiapile ziqale ukungena kwisupermarket, ukungena ...
I-Xuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD. liqumrhu lokuvelisa elisebenza ngobuchule kwimveliso yeebhotile zeglasi, kwitekhnoloji yokusika, iimveliso zeglasi eziphezulu borhasi. Inkampani enamanzi afanelekileyo, umhlaba kunye nokuhamba komoya, kufutshane ne-Lianyungang port. Sine-5 ngokuzenzekelayo ...
ngu admin nge-19-12-09
Umzi-mveliso wethu uvelisa ngaphezu kweentlobo ezingama-800 eziphambili: Ibhotile yeglasi yobusi, ibhotile yeglasi, ibhotile yeglasi, ibhotile yesosi yesiselo, ibhotile yeviniga, ibhotile yeoli, ibhotile yeoli, ibhotile yesiselo, ibhotile yeglasi, ibhotile yeglasi, ibhotile yefuru, isithonga Ibhotile, ibhotile ye wayini yeziqhamo, ibhotile ye wayini yezempilo ...